Nifantoka Tamin’i Yazan Halwani, Mpanakanto An’arabe Ao Beiroty, ny Sain’ny Maro · Global Voices teny Malagasy
Nifantoka Tamin’i Yazan Halwani, Mpanakanto An’arabe Ao Beiroty, ny Sain’ny Maro
Voadika ny 05 Jona 2015 15:00 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, عربي, Français, বাংলা, Nederlands, Español, русский, English
Ny hosodoko amin'ny rindrina ahitàna an'i Fairuz ao Gemmayzeh, Beyroty. Nilaza mikasika an'i Fairuz i Yazan : “Mariky ny fampiraisana eo anivon'ny firenena i Fairuz. Mety ho izy irery no olona iarahan'ny Libane manaiky fa hoe tian-dry zareo. Endrika ara-kolontsaina miabo izy. Anisan'ny sary voalohany nataoko koa izy, nampiasaiko ho peta-drindrina ara-pôlitika ny hosodoko amin'ny rindrina momba azy izay mbola mipetaka hatrany an-taona maro aty aoriana. Tena mahaliana tokoa ny mahafantatra hoe firy ny olona te-hitovy aminy. Sary avy amin'i Yazan Halwani.”
“Ho an’i Beiroty,
Avy amin’ny foko, mandefa filaminana any Beiroty aho,
Ary oroka ho an’ny ranomasina sy ny trano,
Ho an’ny vatolampy izay toy ny tarehin’ny tantsambo antitra.
Avy amin’ny fanahin’ny olona izy, avy amin’ny divay,
Avy amin’ny hatsembohany, avy amin’ny “jasmine”.
Ka nahoana no niova ho setroka sy afo ny tsirony ?”
Noho izany, vakio ny tononkira nadika avy amin’ny hira malaza indrindra an'i Fairuz, “Li Beirut” (Any Beiroty). Voatonona ho toy ny famantarana ny tantaran’I Libanona ilay hira, ankehitriny, feno alahelo sy fahoriana. Fa mihira ho an’i Beiroty sy ny mponina ao aminy koa i Fairuz toy ny hoe vatàna iray aminy -“Ianareo no ahy, ianareo no ahy. Ah, fihino aho”- ao anatin’ny fijaliana sy ny fanantenàna.
Amin’izay hevitra izay, niverina an-dalambe i Yazan Halwani mba hahatonga azy ireo ho ‘Beiruti’ kokoa (Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Beiruti dia ilazàna ny olona avy ao Beiroty) . Ny fitaovam-piadiany ve?. Ny haikanto. Niara-nipetraka tamin’ilay Libane tanora mpanakanto momba ny “graffiti” (rangodrangotra) ny Global Voices Online mba hahitàna ny antony manosika azy.
Yazan Halwani eo anoloan'ny hosodoko amin'ny rindrina ahitàna an'i Fairuz ao Gemmayze, izay mbola tsy vita hatramin'ny farany. Loharano: Facebook.
Global Voices: Azonao lazaina ve ny momba anao azafady?
Yazan Halwani no anarako ary mpanakanto sy mpanao fikaliana soratra eny an-dalana ao Beiroty, Libanona, ny tenako. Efa fito taona teo ho eo aho no mpanao hosodoko an-dalambe, tao Beiroty amin’ny ankapobeny, tanàna izay nahatonga ny aingam-panahiko, fa efa tany Tonizia koa aho, Singaporo, Dubaï, ary Frantsa.
GV: Azonao faritana ve ny asa ataonao?
Angaly iray nampiroboroboiko nandritry ireo taona maro lasa ny asa ataoko ankehitriny. Manambatra ny fikaliana soratra arabo, ny rafitsary tatsinanana ary ny fanaovana modely sy ny fanaovana sarin’olona. Heveriko fa ny asako dia tsy hoe momba ny hosodoko amin’ny rindrina ihany fa mikasika indrindra ny fifandraisan’ny rindrina amin'ny olona sy ny tanàna manodidina azy. Ny hosodoko momba an’i Fairuz ohatra dia lasa mari-pamantarana ho an’ny olona miaina manodidina azy. “Ny rindrina nalaina sary be indrindra tao amin’ny tanàna” no niantsoan'ny tompon’ny trano maromaro manodidina azy. Tamin’ny fotoana nanoratsoratan’ny olona iray tamin’ny hosodoko momba an’i Fairuz, nisy olona mipetraka eo akaikin’io hosodoko io niantso ahy, nefa tsy mahafantatra azy akory, ary nanontany ahy raha afaka mitsabo manamboatra ilay hosodoko teo amin’ilay rindrina aho.
Sary avy amin'i Yazan mikasika ny mety ho fijery ny tolo-dalàna libane LL 100.000 miaraka amin'i Khalil Gibran, ilay poety Libane-Amerikana sy mpanoratra ny “NY Mpaminany”. “Araka ny resaka mandeha, nisy nanome sosokevitra momba ny famolavolana ny vola ao amin'ny mpitantana ny Banky Foibe Libane, araka ny henoko dia nolavina haingana izany nohon'ny fahasarotana mety hitranga amin'ny fametrahana an'i Gibran ao anatin'ilay vola taratasy,” hoy i Yazan. Sary avy amin'i Yazan Halwani.
GV: Inona no nahatonga ny aingam-panahinao hanao izao zavatra izao?
Nampivelatra azy nandritry ny taona maro aho. Mpanakanto momba ny “graffiti” no nanombohako ny asako, nahazo aingam-panahy avy amin’ny tontolon'ny “graffiti” tany Eoropa sy Etazonia, izay ahitana ny mpanakanto amin’ny “graffiti” manoratra ny anarany amin’ny fomba misongadina sy maroloko. Taorian’ny taona vitsy nanaovako izany rehetra izany, nanomboka nanontany tena aho momba ny fifandraisan’ny asako ao anatin’ny tanàna iray any amin’ny Faritra Afovoany Atsinanana: tamin’izany fotoana izany, somary hafahafa ho an'ireo manodidina azy izy, tsapako fa tsy niavaka loatra tamin’izay efa nataon’ireo antoko pôlitika nanerana ny tanàna ny nanoratako ny anarako. Nila nanova famindra aho.
Sendra tojo boky mikasika ny tranga fototra dimy momba fikaliana soratra aho indray andro (Diwani, Koufi, Thuluth, Naqsh, sns…) ka nanapa-kevitra ny hanova ny angaliko: raha tokony ho nanao “solonanarana” aho, handoko teny aho, soratra, sary izay mifanaraka tsara kokoa ao anatin’ny tanàna, ny kolontsaina sy ny manodidina. Amin’izay dingana izay, heveriko fa ny hosodoko tsara atao amin’ny rindrina dia izay miresaka amin’ny olona manodidina azy: lasa ho ampahan’ny tanàna izy no sady lasa azy ireo, fa tsy an'ny mpanakanto.
Ny poety Palestiniana Mahmoud Darwish ao Hamra, Beiroty. Nisy nanimba io hosodoko amin'ny rindrina io ka nanapa-kevitra i Yazan ny handoko azy indray any Tonizia, izay nandanian'i Darwish ampahan'ny fiainany. Hoy izy momba an'i Darwish: “Tiako manokana i Darwish nohon'ny heviny mikasika ny ady ao Palestina, toy izany koa ny tononkalony. Teo akaikin'ny arabe ao Hamra no nanaovako hosodoko voalohany ho azy, arabe iray mety niverenany an-tongotra tamin'ny làlany ho any Beiroty. Indrisy fa nisy olona nisafidy ny nanipy loko teny amin'ny tavany. Raha tokony niverina nandoko azy teoamin'ilay terana nisy azy aho, naleoko nandoko azy lavitry ny mpanimba zavatra. Nentiko ho ao amin'ny lalàn'i Tonizia i Darwish, tanàna izay nandray azy ihany koa. Ho an'ny kaly soratro dia nampiasa ny tononkalon'i Darwish aho izay milaza hoe “Ahoana no mety hahasitrana antsika amin'ny fitiavana an'i Tonizia”
Izany no mahatonga ny hosodoko tsirairay eny amin’ny rindrina mikasa hanana tantara mifandray amin’ny olona miaina manodidina azy: Ny hosodoko ahitàna an’i Ali Abdallah dia mampahatsiahy ny tantaran’ny olona iray tsy manan-kialofana izay maty nohon’ny hatsiaka ary manandrana mamporisika ny olona hanampy na hahatsiaro ny andraikitra ara-tsosialin’izy ireo.
Hosodoko amin'ny rindrina ahitàna an'i Ali Abdallah, olona tsy nanan-kialofana nonina manodidina an'i Hamra. Maty nohon'ny hatsiaka izy. Sary avy amin'i Yazan Halwani.
Tsy hoe tsy mandoko afa-tsy olo-malaza i Yazan. Ny tantaran’i Ali Abdallah dia anisan’ny iray tena manaitra. Toy izao ny tenin’I Yazan:
Misy olona sasany milaza fa “mandoko olona malaza aho”, tsy marina izany. Mandoko endrika milaza tantara aho, ary ampahany amin’ny kolontsaintsika. Ny hosodoko amin’ny rindrina ahitàna an'i “Ali Abdallah”, olona tsy nanan-kialofana niaina tao amin’ny araben’i Bliss, no anisan’ny tena tiako indrinda.
Ny fiainan’i Ali dia voahodidina angano an-tanàn-dehibe mikasika ny fomba nahatonga azy ho tsy nanan-kialofana. Ny sasany amin’ireny dia milaza fa mpampianatra fizika izy, niaina zavatra nampahatahotra nandritry ny Ady an-Trano. Ny zavatra iray nifanarahan’ny rehetra dia ny fitiavan’izy ireo an’i Ali.
Na izany aza, tamin’ny alin-dririnina tena namirifiry no nahafatesan’I Ali. Nitarika fandraisan’andraikitra maromaro tamin’ny fotoana fohy izany loza izany, mba hanampiana ny tsy manan-kialofana ao Beiroty. Afaka volana vitsy taty aoriana, toa hadinon’ny olona ny tantaran’i Ali. Izany no nahatonga ahy hanao hosodoko amin’ny rindrina mba hampahatsiahivana amin’ny olona ny endriny maha-te-ho-tia, ary mba hampahatsiahivana amin’ny olona isan’andro ireny fandraisan’andraikitra amin’ny fotoana fohy ireny.
Hosodoko amin'ny rindrina ahitàna an'i Asmahan, ilay Syriana-Ejyptiana mpihira malaza, mpilalao sarimihetsika ankafizin'ny vahoaka. Hita ao Achrafieh, Beiroty. Sary avy amin'i Yazan Halwani.